U-Eshae Uhlala Ifulethi LeStudio Elisanda Kulungiswa! Cha 2
Ngena ungene efulethini lethu elisha le-studio e-Eshae Living futhi uzwe umoya wokungakhathali wase-Jamaica ukuyisa endaweni yakho ejabulisayo. Uzojabulela ukubuka ingxenye yolwandle lwe-cerulean, ulwandle oluyimfihlo kanye nezinsiza ezisezingeni eliphezulu kusukela enhliziyweni ye-Jamaica, lapho ukude nemizuzu embalwa ukusuka e-Dunns River, Mystic Mountain, Konoko falls, Chukka's Cove namathani amaningi.
Lungiselela uhambo lwakho ngokubuyekeza ibhuku lethu lokuqondisa ukuze uqinisekise ukuthi usebenzisa ngokugcwele ukuhlala kwakho! Kuningi ongakwenza futhi isikhathi siyahamba uma uzijabulisa
4.51 ·119 okushiwo abanye
4.51 out of 5 stars from 119 reviews
4.51 · 119 okushiwo abanye
-I-Turtle Beach Towers inedamu layo lokubhukuda elinonogada ngesikhathi sasemini futhi ulwandle lufinyeleleka mahhala.
-Indawo yokufinyelela olwandle ilawulwa onogada kuze kushaye ihora lesithupha ntambama lapho amasango azobe evaliwe.
-Indawo yokupaka izimoto yamahhala iyatholakala.
-Izivakashi zingakhokha futhi zibhukhe izinsiza ze-spa ezinesaphulelo e-Veroniques Day Spa okuwuhambo lwemizuzu eyi-10.
Mina nabasebenzi bami sihlala sitholakala ngocingo noma nge-imeyili ukuze sikusize.
Ungaqiniseka ukuthi uma ngisesiqhingini ngizoqiniseka ukuthi ngihlangana nawe mathupha!